General Maxamed Cali Samatar oo Maraykanka ku geeriyoodey. – Radio Daljir
General Maxamed Cali Samatar oo Maraykanka ku geeriyoodey.
Agoosto 19, 2016 11:52 g 0
Virgina, Aug 20 2016-AUN Madaxweynihii dowladdii kacaanka ee Soomaaliya General Maxamed Cali Samatar ayaa waxa uu ku geeriyoodey dalka Maraykanka oo uu mudooyinkii ugu dambeeyey kunoolaa.
Waxaa AUN General Samatar oo da’diisu ay ahayd 85 jir ayaa ku geeryooday isbitaal ku yaalla gobolka Virgina ee dalka Maraykanka, sida uu BBC-da u xaqiijiyey mid kamid ah qaraabada marxuumka.
Waxuu ka mid ahaa saraakiisha sida wayn ugu lug lahayd dhismaha milatariga Soomaaliya, Jeneraal Maxamed Cali Samatar ayaana noqday mas’uulkii ugu sarreeyay ee dawladdii kacaanka oo dacwad ka dhan ah la horkeeno maxkamad shisheeye.
DHEGEYSO-Madaxweynaha Soomaaliland oo booqasho kumaraya Sool.